Masikhulume nge-e-mail. Kubaningi babasebenzisi ibhokisi le-elektroniki selivele lide isikhathi eside, futhi alikho, kodwa kunabantu abafuna ukwakha i-imeyili.
Ukubhaliswa kwe-akhawunti ye-imeyili
Qala i-imeyili engcono yamahhala, kodwa kunezinsizakalo eziningi izinsizakalo ezinjalo ezinikezela ngemali, kodwa ayikho iphuzu ekubhaleni ama-imeyili ukukhokha imali. Manje kunzima ukucabanga ngomsebenzisi wenethiwekhi yomhlaba wonke engenawo ibhokisi le-elektroniki. Ukuba khona kwebhokisi le-elekthroniki akuxhomekile kubanga lokuthola indawo yakho yokungena, ukusuka emkhatsini wamadolobha futhi kwenza ukuxhumana nabantu abakuzungezile ngokushesha futhi ngokushesha. Amasevisi weposi ayadingekile uma ethumela ama-imeyili.
Noma yikuphi umsebenzisi we-inthanethi ngokuvamile ubhekene nesidingo esinjalo sokubhalisa i-imeyili. Ngaphandle kwalo awukwazi ukungena kumanethiwekhi omphakathi, ngeke ukwazi ukubhalisa kumawebhusayithi ahlukene e-intanethi. Imithombo eminingi yenza kube lula ukubhalisa ibhokisi lemeyili mahhala. Okudume kakhulu yi-Google, i-Portals Mail, i-Rambler, i-Yandex.
Ukwenza lokhu, uzodinga ikhompiyutha noma ifoni ephathekayo enexhumano lwe-Inthanethi.
Vula isiphequluli se-Intanethi bese ufaka ekhelini lekheli ikheli lesayithi lapho sizorejista khona ibhokisi lemeyili. Thola ukubhalisa okunikezelayo ukubhalisa, chofoza kuso bese uya ekhasini ngefomu lokubhalisa. Sizogcwalisa wonke amaphuzu wemibuzo lemibuzo esinikezwa yona. Kulawo mabuzo, uhlobo olufanayo lwemibuzo kumasayithi ahlukene, udinga ukucacisa igama lakho, igama, idolobha, izwe nokunye.
Sizosungula igama elingalibaleki nelingavamile ebhokisini lemeyili, lokhu kuzoba ukungena ngemvume kusayithi. Kumele ihlangane nezinamba nezinhlamvu zesiLatini. Masifake ukungena ngemvume okusungulwe kulayini othize futhi uhlelo luzonquma ukuthi ukungena ngemvume kuhlukile noma cha. Uma u-yebo, ke uqhubeke nokubhalisa. Uma ukungena ngemvume okunjalo sekuvele kukhethwe ngumuntu, sizovela ngegama elihlukile. Uma ubhalisa kwi-Rambler noma i-Mail, zama ukukhetha isizinda ohlwini oluthile, mhlawumbe ukungena ngemvume kuzoba mahhala.
Sizofika nephasiwedi enamanani, izinhlamvu zesiLatini, izimpawu kanye nezinhlanganisela zabo. Uhlelo lukwazisa, iphasiwedi eqinile ikhethiwe noma cha, sizoyifaka kabusha emgqeni wemibuzo lemibuzo yokuqinisekisa. Iphasiwedi kufanele ibe yinkimbinkimbi ukuze abahlaseli bangakwazi ukuyiphazamisa. Amagama ephasiwedi asetshenziselwa ukubhalisa ezahlukene. Sizobhala phansi iphasiwedi ekulungele bese siyifaka endaweni ephephile, ukuze ingalahleki futhi ikhohliwe.
Phinda iphasiwedi bese ufaka umbuzo oyimfihlo, ukuze uma kwenzeka ulahlekelwe, ungabuyisela iphasiwedi bese ubhala phansi impendulo kumbuzo oyimfihlo. Masiqiniseke ukuthi sikhumbula kahle le mpendulo.
Ake sibonise inombolo yakho yeselula. Uma kukhona enye i-imeyli, sizofaka ikheli layo kulemibuzo. Uma kunesidingo, uzoxhumana nabo futhi uxazulule izinkinga, uma zivela ngebhokisi lakho le-elektroniki. Khetha umbuzo oyimfihlo uphendule. Uma ifoni ethola umlayezo we-SMS ngekhodi yokubhalisa, faka le khodi kulayini olufanele ekhasini.
Sizohlola idatha, sifunde isivumelwano somsebenzisi, faka ikhodi yokuqinisekisa esithombeni (captcha) bese ucindezela inkinobho yokubhalisa. Ibhokisi lemeyili lidalwa, singena ebhokisini lethu le-imeyili, silisebenzise, ​​thumela izincwadi bese uqala ukusebenzisa le nsizakalo ye-imeyli.
Sizobhalisa ibhokisi leposi le-elektroniki ngegama elihle futhi sisebenzise i-imeyili ngenjabulo yethu. Asikhohlwa ukuthi akukho-intanethi izothatha isikhundla sokuxhumana kwangempela. Ngaphezu kwalokho, kufanele ulandele ukuziphatha kwe-imeyili bese uphendula ema-imeyili. Lowo oxhumana naye, angazi ukuthi incwadi yakhe ifinyelele yini, ngoba ngezinye izikhathi i-mail ilahlekile, ngaphandle kwalokho, umuntu kufanele abone ukuziphatha okuyisisekelo.
Indlela yokukhohlisa umyeni wakhe ukuba ayeke ukuphuza?
Indlela yokusebenzisa kahle amandla akho nokuphumula
Kanjani ngokushesha ukuhlanza indlu emva kweholidi?
Ubudlelwano phakathi komyeni nomthandi womfazi
Isanqante eshaqisayo nesaladi lesopuni
Ama-Strawberries, aphethwe ngoshukela
Ukupheka kwe-shampoo ekhaya elihle kakhulu izinwele ezomile namathiphu
Kufanele kube kanjani inkosikazi enhle?
I-Orthodoxy kanye nemfundo yezingane
Ihlaziya amahomoni ngesikhathi sokukhulelwa